भ्रष्टाचार दिवसको औचितियता नेपालमा
हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रयसङ्घको आव्हानमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित भएको दिन अर्थात ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउँदै आइएको छ । अहिले भ्रष्टाचार कुनै मुलुक विशेषको मात्रै नभई सबैको समस्या बनेको छ । विश्वका देशहरुको भ्रष्टाचारको सूचि हेर्दा नेपाल १३१ औँ स्थानमा जमेको छ । यसले प्रष्ट हुन्छ नेपाल पनि भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकहरु मध्ये प्रतिस्र्पधि मुलुक हो । भ्रष्टाचार विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दा नेपालमा सब भन्दा बढि भ्रष्टाचार नेपालका राजनीतिक पार्टिका नेताहरुले गरेका देखिन्छ । त्यसै गरी नेपाल सरकारका कर्मचारी र विभिन्न निकायहरु पनि पर्दछन् ।
हालको आवस्थालाई हेर्दा नेपालमा अन्य निकायहरु भन्दा नेतृत्व पंक्तिहरु प्छि स्थाानिय तहलाई लिनु पर्दछ । मात्र एक वर्ष संचालन भएको लोकत्रान्त्रिक मोडलको स्थानिय तहमा चरम भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । स्थानिय तहमा सब भन्द बढि आर्थिक कारोबार भएको कारणले स्थानिय तह आर्थिक भ्रष्टाचारमा डुवेको देखिन्छ । यसको प्रमुख उदाहरण सूचन लुकाउने र मनोमानी ढङगले विकास कार्यहरु गर्नु हो । स्थानिय तहका अर्को उदाहरण कर्मचारी एक महिना देखि छ महिना सम्म मात्र बस्नु पनि हो । यसको सत्यता के हो भन्ने भ्रष्टाचार गरीयो र जन प्रतिनिधिको सल्लाहमा अर्को ठाउँ सरुव गरायो । यसबाट भ्रष्टाचार गरेको धन लुकाउन कर्मचारीलाई पनि सहज र जनप्रतिनिधिलाई पनि धेरै सहज भएको छ । स्थानिय तहको भ्रष्टाचार महा यगमा नेपाल सरकारको अन्य आफुलाई स्वच्छ र नेपाल सरकारको संविधानिक्र अंकको स्वच्छता प्राप्त निकया पनि हेरी दन प्राप्त गरी पुनय कमाएको स्पष्ट देखन् सकिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार जनताको समस्या मात्र हो भन्ने बुझुनु पर्द सरकार अथवा देशको समस्या होईन् । यदि देशको समस्या भएको भए सरकारलाई नेतृत्व गरेको मान्य जीहरुको सम्पत्ति विवरण र सेवा सुविधाको प्रर्दशिता क्षनभिन गरी जनतालाई जानकारी दिनु पर्दछ । सरकारमा बस्ने ठुल ठुला नेताहरु आफैले बनाएको कानूनलाई नमानि सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकेको देशमा सरकरले भ्रष्टाचारको पाठ दिवस जनतालाई मनाउँन् भन्नु नै मानशिक भ्रष्टाचारको उपज हो । यस उपजको विरुद्धका लागि जनता एक जुट भई स्थानियतह देखि मत दिई जिताएका जनप्रतिनिधिलाई तपाई पदमा नहुँ हामी जस्तै हुने र पदमा पुग्दा कहाँबाट भखारी आयो ? लाखैँ गाडी सबै सहरमा जग्गा जमिन र विदेश बैँकमा पैसा कहाँबाट आयो ? सम्पत्ति विवरण सर्वजनिक गरुनु नेता जि अनि मात्र हाम्रो जनप्रतिनिधि बन्नु होला ? प्रश्न गर्नु पर्दछ । यस्ता सवलाहर स्थानिय तह देखि केन्द्र सम्म उठनु पर्दछ । त्यस पछिको समय आउँछ भ्रष्टाचार विरुद्ध नारा लगाउने । अहिले त देशमा भ्रष्टाचारको रोग लागको छ । अन्तर्राष्ट्रय समुदायलाई पनि थाहा छ तर पनि जनतालाई नारा लागाउन जस्ता अनुरोध संयुक्त राष्ट्रय सन्धिको र्मम कदापि हुदैन् ।